Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » Fanamby lehibe ho an'i Italia: ny Colosseum vaovao
Fanamby lehibe ho an'i Italia - Ny Colosseum vaovao
Iray amin'ireo tranonkala mpizahatany malaza indrindra any Italia, ny Colosseum, havaozina indray ary ho vonona amin'ny 2023.
Io no fanamby feno faniriana mihoapampana indrindra atolotry ny minisitry ny lova ara-kolontsaina italiana.
Ny tetikasa dia mifantoka amin'ny fiarovana sy fiarovana ny arkeolojika rafitra amin'ny alàlan'ny famerenana ny sary tany am-boalohany ny Colosseum ary koa famerenana ny natiora ho milina tsara tarehy sarotra.
Ny sehatra dia napetraka amin'ny haavo efa nisy tamin'ny andron'ny Flavians ary samy manana ny endriny sy ny asany avy amin'ny drafitra voalohany.
Ny tsangambato an'Italiana fantatra amin'ny anarana hoe Colosseum dia hahazo gorodona hazo vaovao miaraka amina fanahy super teknolojia sy maintso miaraka amina rafitry ny takelaka misy vovo-by fibre karbaona izay mihetsika sy mihodina toy ny karazana solila brie be pitsiny indrindra izay hiantoka ny fahitana ny lakaly sy ny rivotra. Toy izao no hisy ny kianja Colosseum vaovao amin'ny 2023, fanamby feno fanambinana sy fifaninanana indrindra nataon'ny minisitry ny vakoka ara-kolontsaina, Dario Franceschini.
Ho “rafitra maivana sy azo haverina tanteraka” io nanome toky ireo mpamolavola an'i Milan Ingegneria, ilay orinasa Venetiana izay nandresy, miaraka amin'ireo manam-pahaizana manokana, ny fanomezana natolotry ny Invitalia ho an'ny fananganana ny tetikasa, novatsiana ara-bola hatramin'ny 2015 miaraka amin'ny 18.5 tapitrisa euro.
“Tetikasa fatra-paniry laza izay hanampy amin'ny fiarovana sy fiarovana ireo rafitra arkeolojika amin'ny famerenana ny sary tany am-boalohany ny Colosseum ary mamerina amin'ny laoniny ny toetrany ho milina manahirana be pitsiny ”, hoy ny famaritan'ny minisitra izay naka am-po ity hevitra ity hatramin'ny 2014 tamin'ny alàlan'ny fandefasana indray ny hevitry ny arkeology Daniele Manacorda ary avy eo nitondra izany hatrany na eo aza ny tsikera sy ny resabe navoakan'ny olona maro.
Ary io androany io dia miverina amin'ny fahafaha-manararaotra ny kianja hita ihany koa ho an'ny hetsika "avo lenta" sy hetsika ara-kolontsaina na fialamboly amin'ny kalitao iraisam-pirenena. "Fantatro fa hisy ny fifandirana," hoy ny faneken'ny minisitra, fa "ny Colosseum no tsangambatontsika an'ohatra; marina ny ifampidinihantsika azy. Fanamby lehibe anefa izany ho an'i Italia. "